အကြံပြုချက်များ: နေ့စဉ်ပြဿနာများအတွက် 35 ကယ်ဆယ်ရေး Beach - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » VIDEOS "အကြံပြုချက်များ: နေ့စဉ်ဘဝပြဿနာ 35 Beach
အကြံပြုချက်များ: နေ့စဉ်ပြဿနာများအတွက် 35 ကယ်ဆယ်ရေး Beach
သငျသညျမှာသဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု. ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အလှတရားချက်ပြုတ်နည်းများ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုရှာဖွေပါ။ ထို့အပြင်, များစွာသောအကြံပြုချက်များကိုသင်အနားယူကူညီပေးပါမည်။ ဤအတောက်ပလဲ tutorial ကိုရှာဖွေဒီဗီဒီယို Watch:
whitening အံသွားဘို့ပြီးပြည့်စုံစာရွက် -Try: စတော်ဘယ်ရီနှိပ်စက်မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါထည့်သွင်းခြင်းနှင့်စနစ်တကျရောမွှေပါ။ ဒီအရောအနှောတွေနဲ့သင့်ရဲ့အံသွားကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်သင်ရလဒ်များကိုခစျြလိမျ့မညျ
-You လွယ်ကူစွာတစ်ဦးသွားကြားထိုးတံသုံးပြီးမျက်ခုံး၏ပြီးပြည့်စုံအကြမ်းဖျင်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့, ဒီအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ်
မည်အကြံကိုဆိုရင်တော့ Matte လက်သည်းဆိုးဆေးမဝယ်, သင်အလွယ်တကူအိမ်မှာဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သင်အကြိုက်ဆုံးလက်သည်းဆိုးဆေးနှင့်အတူလက်သည်းဖုံးအုပ်ထားပါ။ ထိုအခါပူဒယ်အိုးပေါ်တွင်သင်၏လက်ချောင်းထားပါ။ ဖြစ်နိုင်အဖြစ်သို့သော်သတိပြုရကြမည်
-We သင်တစ်ဦးသုံးပြီးစုံလင်သော smoky မျက်စိကျွမ်းကျင်ကူညီနိုငျသောပြောင်ပြောင်တောက်သောမိတ်ကပ်ဝေမျှ
နံနက်ယံ၌လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေအဘို့ဤအေးမြစာရွက်ထုတ် -Check - လူမီနီယံသတ္တုပါးနှင့်အေးခဲ၏ပြင်ဆင်ထားအပိုင်းပိုင်း။ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ်လ်သည်သင်၏မျက်စိ၌မထင် Apply နှင့်သင့်အစက်အပြောက်များဖုံးလွှမ်း
သငျသညျကမ်းခြေမှာအလွကြည့်ရှိသည်နှင့် cellulite ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရချင် -If, ဿုံအလုပ်လုပ်တယ်သောဤစျေးပေါခန္ဓာကိုယ်ပွတ်တိုက်စမ်းပါ။ ပန်းကန်ထဲမှာ, ကော်ဖီနှင့်ပျားရည်ရောမွှေပါ။ ဒီပွတ်တိုက်သုံးပြီးသင့်ရဲ့ခြေထောက် Massage ။ ရက်ပေါင်းများစွာ Repeat
သငျသညျပွင့်လင်းခြေချောင်းဖိနပ်အတွက် overhanging ခြေချောင်းကိုရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လိုသိကြမည်အကြံကို? သင့်ရဲ့ခြေနင်းအံ့သြဖွယ်ကြည့်လျှင်ပင်, ဒီပြဿနာကကြည့်လုယူနိုင်ပါတယ်။ ဗီဒီယို Watch နှင့်တွေ့ပါ
ပူပြင်းတဲ့ကော်သေနတ် အသုံးပြု. ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဘယ်လို
မှောင်မိုက် underarms အဘို့ဤစုံလင်သောစာရွက် -Try ။ တစ်ဝက်တစ်ဦးသံပုရာ Cut နဲ့သကြားနှင့်အတူကိုဖုံးလွှမ်း။
ဂျိုးကြား Exfoliate နှငျ့သငျရလာဒ်ကိုချစ်လိမ့်မယ်
-You ကသဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများထံမှ deodorant ၏နိုင်ပါတယ်။ ပန်းကန်ထဲမှာ, သံလွင်ဆီ, ဟင်းသီးဟင်းရွက် glycerin, ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ်လ်များနှင့်မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါရောမွှေပါ။ နွေးတစ်ဦးအချည်းနှီးသောကွန်တိန်နာနှင့်ရေခဲသေတ္တာထဲသို့သွန်းလောင်း။
00: 09 သွားများအောငျလုပ်နည်း
01: 05 Matt အရောင်တင်ဆီလက်သည်း
01: ဘောက်များအတွက် 38 သံပုရာ
02: 06 Patch ကိုအိမ်လုပ်
06: cellulite များအတွက် 28 ခန္ဓာကိုယ်ပွတ်တိုက်
VIDEO - စူပါနှေးဖက်ရှင်က Galaxy Note ကို9ဖြစ်ပါသည်
11 က iPhone နှင့် Apple: Boom သို့မဟုတ်တွေဆီကနေ? - ဗွီဒီယို
အဆိုပါ Duchess တော်ဝင်သားသမီးများ၏ပြောသောစဉ်ကိတ်မင်းသားဂျော့ခ်ျကိုကျော် gushes - အစာရှောင်ခြင်းကြီးထွားလာ!
အိန္ဒိယ: PoK အပေါ်အစိုးရနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကွာခြားချက်, ဒါပေမယ့်သူ 370 ဆကျဆံ: Tharoor | အိန္ဒိယသတင်း
Ortiz သူတို့ရဲ့ Facebook မှာရေးသားချက်များများအတွက်Taubaté၏လူများကိုဆက်လက် - ဗွီဒီယို
ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Italy - စီးရီးအေ: အစီအစဉ်နှင့် 4e နေ့ကရလဒ်များ - ခြေလျင် 01
အနီရောင်ဂြိုလ်ပေါ်အပြာ၏အရိပ်ဖမ်းမတ်လ Orbital နာဆာအသိအမှတ်ပြု - BGR
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်4,705